မကွေးကျောင်း ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ အမှု ၅ဝ၅(ခ)နှင့် စွဲချက် တင်သင့် မတင်သင့် လာမည့် ရုံးချိန်းတွ? - Yangon Media Group
မကွေးကျောင်း ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ အမှု ၅ဝ၅(ခ)နှင့် စွဲချက် တင်သင့် မတင်သင့် လာမည့် ရုံးချိန်းတွ?
မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအမှုအား စွဲချက်မတင်သင့်ကြောင်း (၁၁)ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်မိုးမိုးအေးမှ လျှောက်လဲချက်တင်ပြခဲ့ပြီး လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် အမိန့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအား ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံး ၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၂)ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအား ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်သို့ ချိန်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ဆရာတော်ရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်များကိုလဲ စာရွက်စာတမ်း၊ အခွေတွေ ဝေပေးဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အရဆိုရင် ဆရာတော်က ဆန္ဒပြဟောပြောသူတွေအားလုံးအပေါ်မှာ နိုင်ငံကြီးသားပီပီသသနဲ့ ကိုယ့်အမျိုးဘာသာသာသနာ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ ဆန္ဒပြ ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ရေသန့်ဘူးနဲ့ ပေါက်တာမျိုး၊ ဆဲဆိုတာမျိုးတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ စသည်ဖြင့် သြဝါဒပေးပြီးတော့ ထိန်းကျောင်းပေးခဲ့တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဆရာတော်ရဲ့ ဟောပြောချက်အစစ်အမှန်ပေါ်မှာ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ၅ဝ၅(ခ)ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်”ဟု မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအမှု ကူညီဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ ဦးအောင်မြိုင်က ပြောသည်။
မကွေးကျောင်းဆရာတော်အား ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)နှင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင် ၁ဝ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအထိ တရားလိုပြသက်သေခြောက်ဦးအား စစ်ဆေးပြီးကြောင်းလည်း သိရသည်။ မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပါမောက္ခအား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုတွင် ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ(၁၉)အတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်လချမှတ်ခဲ့ကာ ထောင်ဒဏ်တစ်လမှာ ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာပြည်မှ ဘုရားများကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခိုးထုတ်ရောင်းချနေသော ဘုရားခိုးဂိုဏ်းအား စစ်?
လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးမှုက လုပ်သားအင်အား လျှော့ချစေနိုင်သလား
နေပြည်တော်တွင် အင်အား ရစ်ခ်ျတာ စကေး ၃ ဒသမ ၈ ရှိ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်တစ်ခု ထပ်မံ လှုပ်ခတ်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နှင်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သော်လည်း မိုးသည်းထန်စွာရွာ
မွန်၊ တနင်္သာရီ၊ ကရင်တို့တွင် မိုးသည်းထန်သဖြင့် ရေကြီးမှုနှင့် မြေပြိုမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် လူဦးရေနှစ်သောင်းခွဲကျော် ခိုလှုံနေရ
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လိုင်းနံပါတ်ပြောင်းခဲ့သည့် YBS-၉၀ ကို တိုက်ကြီးမှ သခင်မြပန်းခြံအထိ ပြေးဆ??
Avengers: Endgame ရုပ်ရှင် ကြိုတင်လက်မှတ်ရောင်းချမှု စံချိန်တင်ခဲ့